SONGZ Teknụzụ | Ikuku oyi Songz Automobile Air Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na June, 2011 ma nọrọ na Shanghai, Ntụ oyi & Refriji Research Institute guzobere R&D emmepe na obodo dị iche iche na China, dị ka Beijing, Chongqing, Nanjing, Hefei, Liuzhou, Suzhou na Xiamen ebe tumadi SONGZ n'ichepụta isi dị na ugbu a ọ nwere ọtụtụ n'ógbè na ọchịchị oru emmepe na ihe karịrị 350 engineering technicians, otu onye nke nna ukwu ogo na n'elu ihe karịrị 10%.
The Research Institute ka itinye ihe karịrị 400 Ikike nchọpụta Kemịkalụ, gụnyere ihe karịrị 100 Ikike nchọpụta Kemịkalụ maka mepụtara, na chepụtara 2 mba ụkpụrụ, 3 ụlọ ọrụ ụkpụrụ na ihe karịrị 40 enterprise ụkpụrụ. Researchlọ Ọrụ Na-eme Nnyocha na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ-mahadum-nyocha na kọleji na mahadum dị ka Mahadum Shanghai Jiaotong, Mahadum Tongji na Mahadum Sayensị na teknụzụ na Shanghai na nzụlite teknụzụ, mmepe usoro mmepe, mmepe kacha elu na mgbanwe agụmakwụkwọ.
Na 2018, mgbe SONGZ nwetere ma nwee akụ nke Finland Lumikko, etolitela ụlọ ọrụ R&D na Europe.
Ihe ngosi SONGZ
R&D Ezi uche
Dabere na isi azụmahịa nke SONGZ na ubi nke ụgbọ ala ikuku conditioner ụgbọ ala, ụgbọ ala ntụ oyi, ụgbọ okporo ígwè n'ụzọ ntụ oyi, ụgbọala friji nkeji, na ntụ oyi na friji research guzobe iwu na-arụ construciton na ngwa nke 10 isi ike.
Glọ Ọrụ Laboratory SONGZ
SONGZ Laboratory center emi odude ke SONGZ HQ, Shanghai China, onwem na ihe karịrị 20 tent nke nnukwu na-ajụ-sized ule equipments. Imirikiti akụrụngwa na-eduga n'ụlọ. Igwe ikuku ikuku, ikuku ikuku na-anwale ule, ulo an-anechoic na akụrụngwa ndị ọzọ ruru ọkwa ụwa. Ọ nwere ikike nyocha zuru ezu maka akụrụngwa ikuku, sistemụ AC, HVAC na ụgbọ ala niile. A nakweere usoro CRM na etiti ule iji jikwaa usoro nnwale, data na akụrụngwa. Na 2016, ISO / IEC 17025 ghọtara ya: 2005 sistemụ nzere nzere nke mba China maka nyocha nkwekọrịta yana na 2018, ụlọ ọrụ nyocha ụlọ akwụkwọ SONGZ bụ nke BYD kwadoro ka ọ nweta asambodo nnabata Laboratory.
Ugboro Ule Ugbo Ugbo
Oge niile. & Uche Ule Ule
Esịtidem Corrosion Test bench
Akwụkwọ asambodo Laboratory site na CNAS
Akaụntụ Ndenye Laboratory nke Nweta site na BYD
Akwụkwọ PSA A10 9000
Ugbo Ala Ikuku Ugbo Ala
Ọwara SONGZ nke ihu igwe jikọtara usoro ikpochapu akpaka na usoro nkewa maka oge mbụ na China. Dabere na foto nkọwa dị elu na teknụzụ na-arụ ọrụ onyonyo, a tụrụ mpaghara defrosting ma gbakọọ ya n'oge, nke mere ka usoro nnwale a ka mma. Ọ bụkwa ọwara mmiri ikuku ihu igwe mbụ na-ejikọ 60 kW DC ngwa ngwa na-ebugharị ngwa ngwa, nke na-enye nkwa dị ike maka mmepe nke sistemụ njikwa ọkụ batrị ọhụrụ.
Igwe ihu igwe ikuku ikuku di na SONGZ HQ, na Shanghai, China, nke kpuchiri ebe 1,650 m² ma nwee ego nke USD 17. Ejiri ya rụọ ọrụ na June 2018, ọkwa ọkwa ya na-eduzi ụwa niile.
Ugbo ala ikuku jụrụ arụmọrụ ule, ụgbọala ntụ oyi kacha kpo oku arụmọrụ ule, ụgbọala oyi mmalite ule, ntụ oyi njikwa mmezi ule, ụgbọala ntụ oyi defrosting / defogging arụmọrụ ule, ntụ oyi arụmọrụ ule, ntụ oyi arụmọrụ ule n'okpuru na-arụ ọrụ ọnọdụ na-ahụkarị obodo , Ugboro igwe usoro ikuku na-agbanwe agbanwe.
Ọdịdị na imepụta nke sistemu usoro niile na-anabata ezigbo ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ ahụ. A na-esite na Germany nweta nkedo nke anyanwụ, chassis Dynamometer, onye na-akwado ya, sistemụ jụrụ oyi, ụlọ nnwale na ngwa ndị ọzọ ndị ọzọ, nwere ike i simomi -30 ℃ - + 60 temperature ọnọdụ gburugburu ebe obibi, 5% -95% nke iru mmiri gburugburu ebe obibi, ya na anyanwụ zuru oke ịme anwansị ọrụ na ike mepụta anọ wheel mbanye Chassis ike mita ngwaọrụ.
Ọwara ikuku enweghị ike ịnwale naanị ikuku ikuku na usoro jụrụ oyi nke ụgbọ ala ndị njem, kamakwa ule dị iche iche nke bọs n'ime 10 mita n'ogologo na 10 tọn na ibu.
Nnyocha na Denvelopu Nddị nke New Eike
1. Nnyocha na ngwa nke ngwa nju oyi dị iche iche
Mba Igwe nju oyi Ozone Imebi ikike(ODP) Okpomoku Okpomoku zuru uwa (GWP)
2. Ngwa nke uzu oku uzu compressor technology na ubi nke electric ụgbọala ntụ oyi
Mgbe ị na-eji ọnụọgụ gas na-arịwanye elu site na iji mejupụta teknụzụ gas, na ọnọdụ gburugburu ebe obibi -25 ℃, usoro ikuku ikuku nwere ike ịme kpo oku nkịtị, ma e jiri ya tụnyere akụrụngwa gara aga n'okpuru ọnọdụ nke COP uru ga-abawanye karịa 30%, na-eduga oge nke "oyi" .
Asingba Enthalpy site na Imeju Gas AC esereese
3. Obere okpomọkụ okpomọkụ mgbapụta:
Igwe ọkụ site na ọrụ dị ugbu a dị oke egwu - 3 ℃, nwere ike belata - 20 Celsius;
Ike ume dị mma karịa ihe eji eme ihe ugbu a ụzọ PTC eletrik inyeaka, ihe mgbaru ọsọ bụ 1.8.
4. CO2 Compressor ngwa - ultra-low okpomọkụ okpomọkụ mgbapụta / batrị kpo oku usoro
Ngwa nke CO2 eke refrigerant gburugburu ebe obibi;
Unique dual rotor double - ogbo mkpakọ, elu olu arụmọrụ, ala vibration;
Esịtidem elu nsogbu na esịtidem ajụ voltaji multimeter dc inverter mbanye, 40 ~ 100Hz, obosara ugboro nso ọrụ; High pụrụ ịdabere, elu ume arụmọrụ, lightness ；
Wid ọrụ nso, na - 40 ℃ gburugburu ebe obibi dị ala karịa nkịtị kpo oku.